Macluumaad Kaa Caawin Kara in Aad ka Badbaado Xanuunka Feyruska Korona | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cudurka Korona waa hargabka oo kale, waxay ku kala duwan yihiin fayraska keeno, laakiin wxay ka siman yihiin astaamaha sida qandho, qufac, cuna-xanuun iyo madax xanuun, dadka qaar wuu ku xumaadaa oo wuxuu isku badalaa burkiito ama oofwareen, dadka qaarne way ka caafimaadaan sida hargabka kaleba looga caafimaado.
Waxaa bilihii lasoo dhaafay dunida aad ugu baahay xanuunka Korona ee loo yaqaano Covid 19, kaas oo kumanaan dad ah ay ugu dhinteen dalalka caalamka.
Dad badan oo dunida ku nool waxay aad uga walaacsan yihiin xanuunkan, waxaana la sheegay in xanuunka u aad usoo rita dadka da’da ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sonkorta, neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. Dadkaas ayaa la sheegay inay u nugul yihiin xanuunka Corona. Haseyeeshee arrinta ugu wanaagsan ayaa ah in qofka uu iska ilaalin karo xanuunka, haddii uu sameeyo tallaabooyinka hoos ku xusan ee ay soo jeediyeen dhakhaatiirta, seynisyahanada iyo hey’adda caafimmaadka adduunka ee WHO.
Gacmaha oo marwalba lagu dhaqo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay qofka ka caawineysa in aysan gacmihiisa ku harin wax jeermis ah ama caabuqa laga qaado xanuunka Corona. Sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka in gacmaha marwalba la mariyo oo lagu dhaqo aalkolada jeermiska disha ee loogu talagalay in gacmaha la marsado. In gacmaha lagu dhaqo saabuun, biyo iyo aalkoladaas waxay ka hortageysaa ama ay dileysaa cabuqa ama jeermiska gacmahaaga ku dahaaran.
Maadaama dadka qaba xanuunka Corona ay aad u qufacaan, waxaa muhiim ah in qofwalba oo qufacaya ama hindishoonaya aad ka fogaato hal mitir. Arrintan ayay hey’adda caafimaadka adduunka ee WHO sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindishooda ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay kasoo baxaan dheecaan duulduul ah, kuwaas oo laga yaabo inay sitaan xanuunka. Haddii aad ku dhaw dahay qofkaas, waxaa suurtagal ah in waxyaabahaas aad neefsato ama ay gudaha u galaan jirkaaga.
Maxay tahay sababta? Haddii aad gacmaha ku taabato meel kamid ah jirkaaga, waxaa dhici karta inay sidaan xanuunka. Marwalba oo ad dooneyso in aad jirkaaga taabato waxaa muhiim ah inaad gacmaha dhaqato. Gacmahaaga waxay si sahlan xanuunka ugu gudbin karaan sanka, indhaha iyo afka, waxayna taas keeni kartaa in caabuqa uu gudaha u galo jirkaaga, taas oo keeni karta in aad xanuunsanto ama uu kugu dhaco xanuunka.
Marwlaba waxaad hubisaa in adiga iyo dadka ka ag dhaw ay si sax ah u raacaan hannaanka saxda ah ee lagu xaqiijiyo nadaafadda neef mareenada. Waxaa muhiim ah in qofka uu daboolo afka iyo sanka. Marwaba oo aad hindishotana waxaad ku dedaashaa in ad isticmaasho marin ama xaanshi nadiif ah, dibna ha u isticmaalin maradii ama xaanshidii aad hore u isticmashay. Tani waxay adiga iyo dadka kale ee kugu ag hareereysan idiin ka caawineysaa in uusan xanuunka faafin oo aan la qaadsiinin dadka kale. Sidoo kale haddii aad dareento in naqaska uu kugu dhagayo oo aad qufaceyso, xilli hore u tag dhakhaatiirta, si xaaladaadda loo ogado.
Cudurka Korona ma yahay sida loo buunbuuninayo ama looga cabsanayo? Jawaabtu waa: Maya, sabbabtuna waa arrimaha soo socda:
100-kii qof oo ku dhaco cudurkaan waxaa celcelis u dhintay ugu badnaan 3 qof inta hadda la xaqiijiyay, taasoo macnaheedu yahay in dhimashadiisu ay aad uga yar tahay markii loo fiiriyo xanuuno kale oo dunida soo maray sida hargabka doofaarka, hergabka shimbiraha, ebola iyo kuwa kaloo badan sida HIV-ga, TB-da, Shuban biyoodka, Malariyada.
Dad badan waxay aaminsan yihiin in xanuunkaan aan laga bogsan, waana fikrad qaldan oo kumanaan ayaa ka caafimaaday.
Dadka badanaa cudurkaan u dhintay boqolkiiba 60% waa dad da’ ah ama xanuunsan ama difaacoodu yar yahay ama aan is la tacaalin.
Waxaa jira dad tira badan oo waqti dambe la ogaaday inuu xanuunka horay u soo maray, sheegayne inaysanba dareemin wax aan hargab ahayn.
Waxay cilmibaarayaashu aaminsan yihiin in xanuunkaan si baahan ugu faafay dunida, wadan walbane uu gaaray, laakiin ay dawladuhu qarinayaan iyagoo u yeelayo arrimo la xiriira dhaqaalaha iyo in argagax aan lagu abuurin bulshada.
Maadaama akhbaarta badankeed ay dadka ka qaataan baraha bulshada, taasi waxay keentay in been laga faafiyay cudurkaan, dadkane ku abuurtay baqdin iyo cabsi.
Tags: Macluumaad Kaa Caawin Kara in Aad ka Badbaado Xanuunka Feyruska Korona
Next post Mareykan iyo Faransiiska Ayaa Noqday Labada Wadan ee iibiya Hubka ugu Badan Dunida
Previous post Waligaa Ma Aragtay Midaan oo Kale, Maxay Dumarkan Wejiga u Marsadeen Dhiigga Caaddada?